Mandalay City Development Committee – MCDC
The Mandalay City Development Committee (Burmese: မန္တလေးမြို့ စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ; abbreviated MCDC) is the administrative body of Mandalay, the second largest city in Myanmar (Burma). MCDC has wide-ranging responsibilities, including city planning, land administration, tax collection, and urban development. MCDC raises its own revenues through tax collection, fees, licenses and property development. MCDC’s chairman acts as Mayor of Mandalay, and sits as the Municipal Minister for the Government of Mandalay Region. MCDC is currently chaired by Mayor Ye Lwin.
MCDC was established first established by the State Law and Order Restoration Council‘s 1992 City of Mandalay Development Law. In 2002, the said law was repealed by State Peace and Development Council and replaced with the 2002 City of Mandalay Development Law. Mandalay Region Hluttaw enacted the new MCDC law in 2014 December. MCDC was formed by the Mandalay Regional Government, and legally comprises 13 to 15 members, includingaChairman who acts as the Minister (Mayor), andaVice-Chairman, who acts as the Vice-Mayor.
Urban Planning and Land Administration Department(Most Corrupted Department)
မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ (အင်္ဂလိပ်: Mandalay City Development Committee; အတိုကောက် MCDC) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော မန္တလေးမြို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီသည် မြို့တော်စီမံကိန်းများ၊ မြေနေရာ စီမံခြင်း၊ အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့် မြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို လုပ်ဆောင်သည်။ စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌသည် မြို့တော်ဝန်အဖြစ် တာဝန်ယူသကဲ့သို့ ၂၀၁၁နောက်ပိုင်းတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ပါ ဆောင်ရွက်သည်။ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၏ လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌမှာ ဦးရဲလွင် ဖြစ်သည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ဥပဒေကို နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှ ရုပ်သိမ်းပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ် မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေနှင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ အဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးမှ ၉ ဦးအထိ ပါဝင်ပြီး ဥက္ကဋ္ဌက မြို့တော်ဝန်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌက ဒုတိယမြို့တော်ဝန်အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ယူသည်။
46,859 ကြည့်ရှုသူပေါင်း, 25 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း
← ကမ္ဘာမြေ သန့်ရှင်းရေးနေ့Mandalay Region →
46,861 ကြည့်ရှုသူပေါင်း, 27 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း
46,864 ကြည့်ရှုသူပေါင်း, 30 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း